Andranandrana, kitsapatsapa… | NewsMada
Ho an’ny mpianatra, izay hiverina an-dakilasy indray manomboka anio, taorian’ny fialan-tsasatry ny fetin’ny paska teo, fotoan’ny fampiharana ny lesona ity telo volana farany amin’ny taom-pianarana 2015-2016 ity. Tsy fotoan’ny andranandrana fa fotoana tokony hifantohana tanteraka amin’izay, satria efa mandondona dia mandondona ny fanadinana. Mba tsy ho very maina na ho faty momoka ny ezaka natao nandritra ny telo volana roa voalohany. Ny hahazoana vokatra tsara, hirosoana amin’ny dingana manaraka indray mantsy no tanjona.
Fa ny fiainam-pirenena mba manao ahoana ? Ny lesona sy ny teoria no malaza fa izay fampiharana, tsy hita misongadina. Toa kitsapatsapa sy andranandrana no betsaka. Impiry izay no nandrenesana, ohatra, fa hamboarina avokoa ny lalana rehetra eto an-dRenivohitra. Aiza anefa izany izao ? Efa hontsankotsanin’ny vahoaka amin’ny alalan’ny hetsika an-dalambe, toy izay nataon’ny mpitatitra sy ny mponina teny Andohan’i Mandroseza vao mikorapaka. Dia ahoana izany ? Hiandry hokotranina koa izany vao hatao ny lalana eny 67 ha ; eo amin’ny Vatobe mihazo an’Antsalovana iny, ohatra, sy ny amin’ny faritra hafa izay efa mila hampingoso ny mpampiasa lalana sy ny mpandeha ?
Tahaka izany koa, teoria no betsaka amin’ity hoe ady amin’ny kolikoly sy fiarovana ny harena voajanahary, na ny harena ambanin’ny tany eto amin’ny firenena ity. Aiza izay vokany hatramin’izao ? Tsy misy izay tena tompon’antoka voasambotra na voasazy, na efa manontsana matetika momba izany aza ny Vondrona eoropeanina, ny banky sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena…
Toa andranandrana sy kitsapatsapa no betsaka eto amin’ny firenena, raha ny lafiny fampandrosoana no resahana. Tsy hita sy mbola tsy azo tsapain-tanana ny fampiharana ny teny nomena, ny fanomezan-toky isan-karazany hatramin’izao telo volana fahatelo amin’ny taona sy taona fahatelo mialoha ny fifidianana filoham-pirenena, amin’ny taona 2018 izao.